शरीर निर्माण आजकल एकदम लोकप्रिय छ, तर धेरै पनि यो खेल कति कठिन महसुस छैन। खाना, शासन पालन, मनोवैज्ञानिक कारक, र जस्तै: त्यहाँ धेरै महत्वपूर्ण र अन्य वस्तुहरू किनभने यसले "हार्डवेयर" खींच यसलाई अस्वीकार्य सीमित छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा बताए छ। यस लेखमा हामी bulking लागि खाना, र वजन कस्तो कसरी हुन विस्तार वर्णन - तल व्याख्या।
लक्ष्य जनसंचार सेट छ शरीर वजन को बोसो भन्दा मांसपेशिहरु व्याप्त प्रतिशतको संग खेलाडी को। 10 किलो को एक सेट मांसपेशी को 6-7 किलो र बोसो मात्र 3-4 किलो को आदर्श क्षमता हुनेछ जब कि छ। सुकाउने 3-6% गर्न बोसो जल मा हुन्छन् जो - दोस्रो चरण गर्न चाहेको ठूलो खेलाडी चाल डायल पछि। सुकाउने - एक जटिल प्रक्रिया, bodybuilders हरेस छ किनभने छिटो कार्बोहाइड्रेट (मिठाई), फैटी खाद्य पदार्थ र मनपर्ने पेय। अन्त यो लागत मिलाउँछ गर्दा तथापि, यो क्षण हो। तर फिर्ता खाना गर्न। यसरी, एकदम सार्वभौमिक जनता, खेलाडीहरूलाई को बहुमत लागि उपयुक्त सेट गर्न शक्ति (ecto- र endomorphs केही सुविधाहरू हुन सक्छ)। यहाँ यस प्रक्रियाको आधारभूत सिद्धान्तहरू छन्।
5-6 पटक एक दिन - आम निर्माण गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवस्था एक विभाजित भोजन हो। यो तपाईं आफ्नो पाचन प्रणाली डाउनलोड गर्न र एकै समयमा दिन भर रगत प्रवाह मा पोषक प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ अनुमति दिन्छ। अंश उच्च प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट संग सानो हुनुपर्छ।
कार्बोहाइड्रेट - आफ्नो खाना को आहार मा एक महत्वपूर्ण भाग हो, किनकी तिनीहरूले ऊर्जा संग शरीर आपूर्ति। खाएको कुल को लगभग 70% उच्च क्यालोरी खाद्य पदार्थ हुनुपर्छ। तथापि, तपाईं थप सुस्त कार्बोहाइड्रेट (विभिन्न अनाज) र छिटो छैन (मिठाई) तेजी बोसो मा शरीर द्वारा प्रक्रिया कि चाहनुहुन्छ कि सजग हुनुहोस्। फल र बहुमूल्य फाइबर मा धनी छन् कि तरकारी बारेमा भूल छैन, तर आफ्नो शेयर 30% गर्न गिर गर्नुपर्छ।
छिटो Carbs को खपत कम गर्न साथै, तपाईं पनि कम बोसो खान आवश्यक छ। विशेष गरी "खतरनाक" छन् संतृप्त बोसो (फैटी मासु, मेयोनेज, sausages र जस्तै)। तर तिनीहरूलाई त्यसपछि चयापचय विघटन गर्न सक्छन् किनभने, आफ्नो आहार देखि पूरै हटाउन असम्भव छ। उपयोगी माछा (पनि बोसो) र माछा तेल को प्रयोग हो। छिटो कार्बोहाइड्रेट पनि उपयोगी हुन सक्छ। तपाईं एक खोल्न गर्दा प्रयोगको लागि सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट समय, को कसरत को अन्त हुनेछ प्रोटिन-कार्बोहाइड्रेट विन्डो।
शासन पिउने बारे मा भूल छैन। मांसपेशिहरु सेट गर्दा, शरीर चयापचय प्रतिक्रिया को धेरै हुँदा, पानी एउटा महत्त्वपूर्ण भाग, यो सबै प्रतिक्रिया को पूरा गर्न को लागि आवश्यक छ किनभने छ। प्रति स्वच्छ पानी दिन 2.5-3 लिटर लागि खान (चिया, पेय पदार्थ र sodas गणना छैन)।
लगभग समानुपातिक यो जस्तो हुन सक्छ:
कार्बोहाइड्रेट सामग्री - 50-60%;
प्रोटिन सामग्री - 30-35%;
बोसो सामग्री - 10-20%।
यसलाई वजन सेट लागि उचित आहार जस्तो हुनुपर्छ। तर, कुनै सिद्ध सम्बन्ध हो कि सजग हुन, प्रत्येक व्यक्ति को लागि - अद्वितीय छ। तपाईं गम्भीर शरीर निर्माण गर्न निर्णय गर्नुभएको छ भने, यो तपाईं यो सनक सामना गर्न मद्दत गर्ने एक पेशेवर प्रशिक्षक संग परामर्श गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। मांसपेशिहरु मा सहयोग प्रोटीन, Creatine, creatine र एमिनो एसिड सहित खेल पोषण, सेट हुन सक्छ। मजा 20-30 वर्ष पहिले, खेल पोषण को उद्योग अझै विकसित छैनन् जब गएको छ, bodybuilders शिशु सूत्र ठूलो भर्ती लागि प्रयोग गर्ने तथ्य। किन? यो धेरै सरल छ। गन्तव्य आधारित, यो पर्याप्त गुणस्तरको थियो र यो एक राम्रो gainer बनाउने, एकै समयमा 30-35% प्रोटिन र 65-70% कार्बोहाइड्रेट मा भएको थियो। जो सिर्फ एक सुन्दर शरीर को पछि लाग्नुलाई मा आउन सक्छ! खैर, खाना ठूलो को एक सेट खोज्नुपर्छ कसरी मूल कुराहरू, हामी वर्णन गरेका छन्। र भइरहेको लगनशील भई छ महिना लागि कब्जा गरिएको, तपाईं खाना "आफूलाई लागि।" छनोट हुनेछ शुभकामना छ!
कसरी द्रुत छाती माथि पंप? घर मा प्रशिक्षण निर्णय जो कोहीले लागि सरल सुझाव
Aleksey ALEKSEEV - फुटबल क्लब लाटविया को "Ventspils"
Sintepon-200 इन्सुलेशन, के तापमान गर्न उपयुक्त?
नाइट्रोजन के हो? आम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अणु
के रोटी मानव स्वास्थ्य को लागि उपयोगी छ?
एक कटुस सुझाव माली बाट एक ओक कसरी बढ्न
वसन्त मा चमेली कसरी रोपेर गर्न? देश मा shrubs रोपण